Clarkia: foto na ụdị, ịkọ na nlekọta - Osisi - 2020
Clarkia - Sakura Ifuru
Clarkia bụ ahịhịa ahịhịa mara mma nke ukwuu kwa afọ nke nwere agba na-enweghị atụ ma dị egwu. N'ihi dịgasị iche nke ndo pink na okooko osisi buru ibu, a na-akpọkarị Clarkia "sakura." Osisi ahụ bụ nke ezinụlọ Saịprọs. Ala nna ya bụ Chile na agwaetiti Pacific nke North America. Okooko osisi gbara agba, dị ka à ga-asị na ọ na-adị gị mkpa, na-etolite agwaetiti nwere ọtụtụ agba n’ubi. Nke a ga - eme ka saịtị ahụ mara mma karịa ma na - adọta ọtụtụ nlebara anya. Ogige ifuru mara mma ga-aghọ nganga nke ndị nwe ya. Clarkia amachaghị anya, mana ekele maka obere aghụghọ, okooko ga-aba ụba ma ga-anọ ogologo oge.
Nkọwa nke Botanical
Clarkia bu ahihia nke ahihia na enwe ahihia ahihia. In ga-enwe ezigbo osisi ga na-eto nke ọma, yabụ, osisi ahụ na-etolite ohia 30-90 cm dị elu. A na-ese akwụkwọ mgbe niile, sessile ma ọ bụ obere obere obere, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Mgbe ụfọdụ, a na-ahụ ọnya ọbara ọbara n’elu ala. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nwere ọdịdị dị mma na njedebe a kapịrị ọnụ.
Ugbo na-amalite na Mee-June, ọnwa abụọ ka ọgha mkpụrụ. N'elu nke Ome ahụ, a na-etolite ifuru axial na pedicels dị mkpụmkpụ. Ha nwere udi ziri ezi na obere tube. A na-ese paịlị dị obere na pink, odo odo ma ọ bụ nke lilac nke ike dị iche iche. Petals nwere ike ịmịcha ma ọ bụ na -eme ka ihu ya. Enwere buds dị mfe ma dị ụtọ. Okooko osisi na-esi ísì ụtọ siri ike na-adọta ụmụ ahụhụ bara uru na mpaghara ahụ.
Mgbe ntụgharị ọbara gasịrị, a na-ekekọta mkpụrụ osisi - obere mkpụrụ osisi oblong. Ha na-eji mkpuchi aja aja zoo obere mkpụrụ. Ha na-ejide ike maka afọ 2-4. Mpempe mkpụrụ na-emeghe mgbe matati mepere, nke na-akpalite ịgha mkpụrụ.
Clarkia adịghị ọtụtụ. O nwere ihe dị ụdị iri atọ, mana naanị 4 n’ime ha ka eji eme ya. Ndị na-azụ ihe gbakwara ahịhịa dị iche iche mma. Osisi na-adị mma n'ihe ọkụkụ monophonic, yana mgbe ha na-ejikọ ụdị clarkia dị iche iche nke nwere agba mara mma.
Clarkia mara amara. Osisi ahụ ruru sentimita 90. Ọ mejupụtara ụrọ gbara ọkpụrụkpụ. Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị nke nwere veins a kpuchiri ekpuchi nwere ọdịdị oval na n'ọnụ nwere akụkụ. Ugbo na-apụta site na June rue Septemba. N'elu nke ị ga na-etolite carpal inflorescences rụrụ. Dayameta nke ọ bụla dị ihe dị ka cm 4.
Zuru okè salmon ("izu oke nke salmon") - ifuru gbara 70-90 cm dị elu kpuchie inflorescences terry na salmon petals;
Albatross - okooko osisi snow na-acha ọcha na-acha ọcha na-eto na ohia 75cm dị elu;
Diamond - a na-eji okooko osisi buru ibu nke agba pink na-acha ọcha chọọ ya mma.
Gloriosa - osisi kpuchie ifuru ahụ dị mfe na-acha uhie uhie na obere ọkụ.
Clarkia mara amara
Clarkia mara mma. Ngwakọta dị iche iche anaghị agafe 40 cm n'ogo. Akwụkwọ osisi elongated green nwere ihu siri ike na onu ọma. Axillary okooko osisi na-eto na nsọtụ nke Ome. Ha dị otu mgbe ma ọ bụ obere obere obere. A na-ekewa petals dị nro, nke dị nro ka ọ dị atọ ma yiri mpi mgbada ma ọ bụ mpi mgbada. Ugbo na-amalite na mbubreyo May.
Clarkia mara mma
Clarkia Breveri. Nlele putara na 2006. Osisi ruru 50 cm toro ogologo na-eguzogide oyi. Akara okooko osisi siri ike na dayameta enweghị ihe karịrị cm 3. A na-eji ifuru clarkia pink tụnyere okooko sakura.
Clarkia Terry. Nke a kwa afọ iche-ok Ome n'ihi ukwuu branched Ome. Ogo nke bushes bu 40-65 (90) cm. Akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị gbara agba gbara ya gburugburu na okooko osisi abụọ na-acha ọcha, pink, odo odo na paịndụ burgundy.
Prozọ Propagation na ala
Zọ kachasị mma ịgbasa clarkia, dị ka kwa afọ, bụ ịgha mkpụrụ. N'ime oge ha cha cha n'ọtụtụ na osisi, yabụ enweghị nsogbu ọ bụla. Enwere ike ịgha mkpụrụ maka seedlings ma ọ bụ ozugbo na-emeghe ala.
Seedlings nwere ike ẹsuande ke mme akpa March, mgbe ahụ, okooko na-atụ anya na nkera nke abụọ nke May. Iji tolite seedlings clarkia, a na-akwadebe igbe sara mbara site na mkpụrụ. Ihe mebere ala a mejuputara:
ala mpempe akwụkwọ (akụkụ 2);
humus rotted (akụkụ 1);
peat (akụkụ 1);
ájá (akụkụ 1).
Shouldwa ga-steamed si pests, na sook nke osisi ruo ọtụtụ awa na ihe ngwọta nke potassiumgangan. Mkpụrụ osisi ga-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1.5 cm cm 1. A na-efesa elu ahụ site na egbe ịgba ma jiri iko ma ọ bụ ihe nkiri kpuchie ya. Germination na-ewe ụbọchị 14, mgbe nke a ga-ewepụ. A na-etolite Seedlings na udo dị mma ma na-ekpo ọkụ.
A na-etolite mkpụrụ osisi na-enweghị ndọkpụ mmiri ruo mgbe mbufụt ahụ ga-emeghe n'ala. All clarkies, ma karịsịa ngwakọ iche, anwụ mgbe transplanted ọzọ. Iji zere nsogbu a, ị nwere ike ịgha mkpụrụ dị na mbadamba peat. N'okwu a, rhizome adịghị emerụ ahụ mgbe a kụrụ ya n'èzí. Ọ dịkwa mkpa ka ị ghara ime omimi mgbọrọgwụ.
O nwere ike ịgha mkpụrụ ozugbo ozugbo oghe. Seedlings toro n'otu ebe anya ike na oge ntoju ngwa ngwa. Usoro a rụrụ na May, mgbe oge opupu ihe ubi frosts gafere. N'ebe a na-akụ ihe, ị kwesịrị iji nlezianya gwuo ala, wepụ ahịhịa ma mee nri fatịlaịza. A na-akụ mkpụrụ dị omimi nke 1.5-2 cm na anya nke 4-5 cm.
Ọnọdụ ahụ. Clarkia bụ ihe ọkụkụ na - akọ ngwa ngwa. Ahụ ike ya niile na-emeghe anyanwụ na ele mmadụ anya n'ihu ndo. Ọzọkwa, ọ naghị atụ egwu drafts na jụrụ oge dị mkpirikpi. Osisi ahụ na-ahọrọ ọkụ ma na-eme nri nke ikuku nwere ike ịbanye na mgbọrọgwụ. N’ezie, Clarkia nwere ike imeghari ka okpukpu ụrọ dị arọ, mana ọ gaghị eto nke ukwuu.
Ọdịda Ebe ọ bụ na Clarkia bụ ezigbo ihe e ji mara ya, ọ nwere ike ịchọ mkpa. Oghere dị n'etiti ihe ọkụkụ toro eto kwesịrị ịbụ opekata mpe karịa 15. Nke a ga-eme ka anyanwụ na ikuku banye na mpaghara akụkụ nke ome, nke pụtara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ifuru ga-adị ka mma.
.Gbara mmiri. Ọ ka mma ị Clarụ mmiri Clarkia mgbe niile nke mere na ọ bụ naanị topsoil na-ata. Mgbe mgbọrọgwụ kpọrọ nkụ, akwụkwọ ya na ome bidoro ịtụgharị edo edo. Ọkpụkpụ nke mmiri na-eso akpata mmepe nke mgbọrọgwụ ire ere. Ọ bụrụ na mmiri ọdịda na-ada n'oge ọkọchị, ị nwere ike ịme na-enweghị mmiri. Ma ọ bụghị ya, a na-agba ala mmiri n'obere mmiri.
Iru mmiri. Osisi ahụ adịghị mkpa oke iru mmiri. A na-ahọrọ ebe anwụ na-acha na anwụ ikuku.
Fatịlaịza. Site n’oge ịbịaru, Clarkia chọrọ inye ya nri oge niile. Ugboro abụọ n'ọnwa, a ga-etinye ihe ngwọta nke ọgwụ ndị a na-enweta mmiri maka ahịhịa n'ubi. Ha nwere ihe niile dị mkpa ma anaghị emerụ ụmụ ahụhụ bara uru.
Guzobe okpueze. Osisi na-eto eto nke nwere ihe dị ihe dị ka cm 10 nwere ike ịkekọrịta iji nwetakwu ọhịa. Ọ ka mma ịkwachasị ifuru ahụ ka ha chọrọ, ka ihe ọkụkụ wee nwee ike ịdị mma. Shouldkwesịrị ịhọrọ obere buds maka mkpụrụ osisi. Mgbe emechara okooko, a na-atụ aro iwepu Ome ndị ọzọ ma gwuo ala. O kwere omume na afọ na-abịa ịkọ mkpụrụ ga - apụta na Clarkia ga - atụte na - enweghị mbọ ọ bụla n’ebe ọ dịbu.
Enwere ike ịmalite Clarkia ọ bụghị naanị n'okporo ámá, kamakwa na mbara ihu ma ọ bụ n'ime ụlọ. Agbanyeghị, ụlọ ụlọ nwere ogo na obere ifuru. A ga-etinye ite clarkia n'ime ebe a na-enwu nke ọma. Nwere ike itolite ya ọbụna n’oge oyi, na-eji ọkụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n’osisi a na-emeghe n’ubi amịghị n’oge ma ọ nweghị oge iji oge ntoju, a ga-egwu ya ma nwee nnukwu ala ma nọgide na-eto n’ụlọ. Ekwesịrị icheta na ọbụna nlekọta kachasị arụ ọrụ agaghị eme ka clarkia ghọọ nke oge. Mgbe okooko osisi gwụchara, rhizome amalite ịnwụ.
Ọrịa na Ọrịa
Clarkia bụ ọrịa na-eguzogide ọgwụ. Naanị mgbe etolitere ke keguru mmiri ebe, na idei mmiri soils, na mgbọrọgwụ na Ome na-emetụta ero. Ọdịdị nke ọcha a na-acha ọcha ma ọ bụ aja aja na-acha uhie uhie na mkpịsị akwụkwọ ahụ na-egosi ọrịa. Ọ gaghị ekwe omume ịchekwa osisi ndị dị otú ahụ, a ga-ebibi osisi niile ma ala mesoo ya.
Ọrịa a na-ejikarị clarkia bụ fulawa nke ubi. Ọ na-edozi mkpụrụ osisi na-eto eto ma gbochie uto ha. Ọgwụ na "Karbofos" ma ọ bụ "Fufanon" na - enyere aka iwepụ nje ndị ọzọ.
Clarkia nwetara mkpesa kasịnụ n'ìgwè buru ibu. Mgbe ahụ ọ yiri kapeeti kpuchie ya na okooko osisi na-esi ísì ụtọ. A na-akụkarị ihe ọkụkụ n’akụkụ ogige ma ọ bụ n’akụkụ ụzọ. Nwere ike ijikọ ụdị na agba dị iche iche n'otu ubi ifuru. Clarkia dị mma na mpaghara asters ma ọ bụ phlox, Roses ma ọ bụ conifers.
Okooko osisi ndị na-esi ísì ụtọ na-adọta ụmụ ahụhụ bara uru, yabụ, ahịhịa na-adị mma n'anya. A nwekwara ike iji Clarkia mepụta ùkwù. Ahịhịa nke okooko osisi siri ike ga-eguzoro na ite akpa maka izu 1-2.